DF oo hakisay qabashada codsiyada Baasaboorada | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo hakisay qabashada codsiyada Baasaboorada
Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha ayaa hakisay ilaa amar dambe qabashada codsiyada sameynta Baasaboor -rada, kaddib laba-kacleynta Caabuqa Covid-19 ee adduunka oo dhan saameeyay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wargelin si toosa uga soo baxday xafiiska Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha ayaa lagu sheegay in la hakiyay qabashada codsiyada sameynta Baasaboor -rada, laga billaabo 27/Febaraayo/2021 ilaa waqti aan la cayimin ayuu hakadka jiri doonaa.
Sababta ayaa lagu sheegay caabuqa sii faafaya ee adduunka oo dhan halakeeyay ee Corona Virus Covid-19. kaasoo faro ba'an ku haya dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay sii korortay kiisaska dadka laga helayo caabuqa iyo weliba tirada dadka u dhimanaya oo iyana aad u korortay.
Qoraal rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha ayaa lagu yiri "Khatarta Caabuqa COVID19 oo sii kordheysa awgeed, Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyaddu, waxay muwaadiniinta Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan ku wargelinaysaa, in laga bilaabo maalinimada Sabtida ah, taariikhduna tahey Febaraayo 27, 2021 la hakiyey qabashada codsiyada baasaboorka ilaa wargelin danbe."